Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Laga soo bilaabo Super Fun Hot Spot ilaa Darbiyada Amniga iyo Ilaalada
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Warshadaha Warshadaha • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Wadada Socodka ee Pattaya - xushmada sawirka Pattaya Mail
Jawiga foosha xun iyo madhan ee waddada ugu caansan ee Pattaya waxaa hakad geliyay kaliya saddex unug oo dukaan oo weli furan: bakhaar ku habboon Family Mart iyo farmashiye yar oo labaduba u muuqda inay wax u qabtaan dadka maxalliga ah ee weli ku sugan goobta, iyo dukaanka dharka ee Japan oo sugaya dulqaad u yeelo waqtiyada wanaagsan si aad u rogto.
Bishii la soo dhaafay, goob lagu caweeyo oo Nashaa ayaa dhibbane dabku ka dhacay waxaana hadda lagu qariyay xayndaab ammaan oo aad u sarreeya.
Sababo ammaan awgood, dhismayaal kale oo badan oo aagga ku yaal ayaa lagu daboolay isla biraha ku yaal Waddada Caanka ah ee Socodka.
Ilaalada amniga ayaa tan iyo dhacdadan saddex jibaarmay inkastoo aysan jirin macaamiil maalmahan.
The dhibbane dab ka kacay bishii hore, Caweyska Nashaa gudaha Pattaya, Thailand, waxaa hadda lagu ilaaliyay xayndaab aad u sarreeya oo leh irrid yar oo dhallinyaro ah. Isbeddelka weyn ee Walking Street wuxuu ka baxay meel aad u xiiso badan oo wuxuu u wareegay magaalo cirfiid ah, oo leh dhismayaal kale oo badan oo lagu daboolay xaashi biraha ah sababo ammaan awgood.
Meel hal kilomitir ah, tirada ilaalada gaarka loo shaqaaleysiiyey ayaa saddex laabantay. Baar hore ayaa jaray kharashaadkii ilaalintiisa iyada oo la adeegsanayo eey silsilad xanaaqsan taa beddelkeeda taas oo ku dartay hanjabaad qaylo u gaar ah ogeysiiska labada-luuqadood ee ku amraya dadka jidka maraya inaysan soo gelin xaalad kasta. Markaysan dadka u hanjabin, eygu si bir ah ayuu ugu dul fadhiistaa sariir leh “Soo dhawoow.”
Waxaa mahad leh Pattaya Mail
Ilaaliye ka ag dhow Mr. Katee ayaa yiri, “Dabkii Nashaa wuxuu qof walba ka dhigay mid dareen -geliya. In kasta oo aanay jirin macaamiil maalmahan, haddana waxaa jira lacag aad u badan oo ku xidhan dhismayaashan hore. ” Wuxuu u malaynayaa in milkiilayaasha iyo kireystayaashu ay sugayaan in la siiyo lacagtii ay ku diyaarin lahaayeen burburinta jumlada.
Cid walba ma ogola. Qaar ka mid ah dagaalyahannada keyboard -ka maxalliga ah waxay qiyaasayaan inay tahay waqti uun ka hor ganacsiga sida caadiga ah u soo noqota masiibada kadib iyo waqtiyada wanaagsan ayaa mar kale soo noqda. Waa inay halkaas u lugeeyaan kahor intaanay aad ugu kalsoonayn. Xarunta Dawladda Hoose, dhinaceeda, waxay hubaal ahaan taageeraysaa isbeddellada waaweyn ee iman doona. Wax ruqsad ah oo lagu shaqaysto meheradaha la xiriira khamriga lama bixin doono sannadka 2022-ka, halka dhismayaasha dhinaca badda ee biyaha dhex-gala loo qorsheeyay in la dumiyo. Shirkadda korontada ee gobolka ayaa si xoog leh ugu aaseysa fiilooyinka dusha sare ee Walking Street, laakiin fikradda guud ayaa ah in loo diyaar garoobo firaaqada socodka iyo aagga ganacsiga halkii laga magan geli lahaa qoob-ka-ciyaarka cirifka chrome.
Wadada Dhaqaalaha Bariga, oo ah isbahaysi hodan ah oo Thai ah iyo shirkado magac leh oo ajnabi ah, ayaa ah qodobka go'aaminaya. EEC waxay horey u maalgelisay dhowr mashruuc oo maxalli ah-isku xirka waddooyinka, hagaajinta dekedda Bali Hai, dayactirka xeebta Jomtien iyo Pattaya, iyo tareenka xawaaraha dheereeya ee isku xira aagga iyo Bangkok-waxyarna shaki kuma jiro inay dhowaan ku dhaqaaqi doonto Walking Street. Marka cagaf -cagafyada ugu dambayntii soo guuraan, dariiq aad uga duwan ayaa ka soo baxaya dambaska.
Si kastaba ha ahaatee, xayndaabyada birta ah ee la xiray iyo siligda xooga leh cidna ma seegi doonto. Kaliya booqdayaasha naadiyada ayaa ah gawaarida qashinka.